Izindaba - Ukwazi ukuhlukaniswa kweflask, ukusetshenziswa, indlela yokusebenzisa kanye nezindaba ezidinga ukunakwa
Ukwazi ukuhlukaniswa ngeflask, ukusetshenziswa, indlela yokusebenzisa kanye nezindaba ezidinga ukunakwa
Ukwazi kwe- ukuhlukaniswa kwebhokisi, okusetshenziswayo, indlela yokusebenzisa kanye nezindaba ezidinga ukunakwa
Eyodwa. ukuhlukaniswa kwe-flask
Ibhodlela elivame ukusetshenziswa linebhokisi eliyindilinga elingezansi, iflask engezansi eyisicaba kanye ne-distillation flask
Ibhokisi eliyindilinga elingezansi
Ibhodlela eliyindilinga elingezansi liyi-flask yeglasi ebonakalayo enezansi eziyindilinga. Yisitsha sokushisa nokuphendula esivame ukusetshenziswa ekuhlolweni kwamakhemikhali. Sebenzisa ama-flasks ngamanani amakhulu wamanzi namashubhu wokuhlola ngamanani amancane.
Ibhodlela elisezansi eliphansi
Iflaski elingezansi le-Flat ngenxa yaphansi, lapho ukufudumeza kuzofudunyezwa kungalingani, ngakho-ke akusetshenziswanga njenge-reactor yokushisa, futhi iflask engezansi eyisicaba ikulungele ukubamba isitsha esivame ukusetshenziselwa ukuphendula ngaphandle kokushisa.
Isitsha sengilazi esisetshenziselwa ukuphuzisa iziphuzo zazihluzwa noma ukuhlukaniswa. Imvamisa isetshenziswa ngepayipi lokujiya, ipayipi lokuthola uketshezi nedivayisi ethola uketshezi. I-generator yegesi nayo ingahlanganiswa.
1. Isiphenduli esiqinile samanzi noma isiketshezi esiketshezi oluyiketshezi.
2. Hlanganisa igesi yokuphendula igesi (izinga lokushisa elijwayelekile, ukushisa).
3. Distillate or fractionate liquids using a distillation flask, which is flask with a branch pipe.Iziphuzo ezihlukanisiwe noma ezihlukanisiwe usebenzisa i-distillation flask, eyi-flask enepayipi legatsha.
1. Babukeka behlukile
Ibhodlela eliyindilinga elingezansi: idivaysi yamashubhu engilazi ezacile engenakho okuya phansi kancane entanyeni yebhodlela. Intamo yebhodlela yipayipi eliqondile.
Ibhodlela elingezansi le-Flat: Umehluko phakathi kwephansi eliphansi neli-flask engezansi eliyindilinga ukuthi phansi kuyisicaba.
Ibhodlela le-Distilling: ithubhu yengilazi ezacile enwebeka kancane entanyeni yebhodlela, esetshenziselwa ukukhipha umhwamuko, ngoba uyadingeka ekunciphiseni uketshezi. Ngaphezu ziphuzo zazihluzwa ukufudumeza kudingeka sivale umlomo ibhodlela, kumele kube omunye tube out.
2. Ukusetshenziswa okuhlukile
Ibhokisi eliyindilinga elingezansi: lingafudunyezwa isikhathi eside, kepha kufanele lifakwe i-asbestos mesh. Ibhodlela eliyindilinga lingasetshenziselwa ukushisa inani elikhulu loketshezi ngendlela evaliwe, futhi lingasetshenziselwa nokuhlolwa komthombo.
I-distillation flask: I-Side tube entanyeni, isetshenziswa ikakhulu ekusebenzeni kwe-distillation.
I-Flask: I-Flask isetshenziswa njengomkhumbi wokuphendula uketshezi ongadingi ukufudumeza ngoba iqiniswa kalula epulatifomu enezingqimba.
Isine, Sebenzisa indlela
(1) Izici ezivamile
1 Skufanele ibekwe ekushiseni kwenetha le-asbesto, ukuze kufudunyezwe ngokulinganayo; Lapho kufudunyezwa, udonga olungaphandle lwebhodlela kufanele lungabi namaconsi amanzi.
2 Flask ayikwazi ukusetshenziswa isikhathi eside ukushisa.
3 Lapho ingafudunyezwanga, uma ibhodlela elisezingeni eliphansi lisetshenziswa njengesiqukathi sokuphendula, asikho isidingo sokuyilungisa ngohlaka lwensimbi.
1. Iflaskhi eyindilinga
(1) Ubukhulu obuphansi bebhokisi eliyindilinga elingezansi liyifomu, futhi abukho onqenqemeni, obungasetshenziswa isikhathi eside ukusebenzisa ukushisa okuqinile.
(2) Lapho kufudunyezwa, ibhodlela kufanele libekwe enetheni le-asbestos futhi alikwazi ukufudunyezwa ngqo yilangabi.
(3) Ngemuva kokuphothulwa kocwaningo, uma kukhona ipayipi le-catheter, i-catheter izosuswa kuqala ukuvimbela ukuhamba kwamanzi, bese kuthi umthombo wokushisa uzosuswa, futhi ngemuva kokuphola okumile, uketshezi lwemfucuza luzolashwa futhi lugezwe.
(4) Lapho ibhodlela lifudunyezwa, inetha le-asbestos kufanele ligwedliswe, okungafanele lidlule u-1/2 wevolumu yebhodlela (ngokwesaba ukuthi isixazululo esiningi kakhulu kulula ukusikhipha lapho sibilisa noma ingcindezi eflaskini kuphezulu kakhulu bese kuqhuma ibhodlela).
(1) ukupha inetha le-asbestosi lapho kufudunyezwa, kungafudunyezwa nokunye okugeza okushisayo. Uma ushisa, ivolumu ewuketshezi akufanele yeqe u-2/3 wevolumu, hhayi ngaphansi kwe-1/3 yevolumu.
(2) Lapho ufaka izesekeli (njengama-thermometer, njll.), Kufanele kukhethwe ama-plug afanele enjoloba, futhi kufanele kunakwe ngokukhethekile ukubheka ukuthi ukuqina komoya kuhle yini.
(3) kungcono ukufaka inani elincane le-zeolite (noma i-porcelain ephukile) ezansi kwebhodlela kusengaphambili lapho kufakwa i-distillation, ukuvimbela ukubila.
(4) lapho ukufudumeza kufanele kubekwe kunetha le-asbestos, ukuze lifudunyezwe ngokulinganayo.
(5) Ngemuva kokuphuzisa iziphuzo, i-piston kufanele ivalwe kuqala bese imisa ukushisa ukuvimbela ukuncela.
(6) Ukuma kwebhola le-mercury le-thermometer ngesikhathi se-distillation kufanele kugudle unqenqema olungezansi lomlomo wepayipi legatsha leflillation distask.
Okuhlanu, Izinto ezidinga ukunakwa
1. Uketshezi olufakiwe aludluli ku-2/3 wevolumu yalo futhi lungabi ngaphansi kwe-1/3 yevolumu yalo.
2. Uma ushisa, sebenzisa i-asbestos mesh ukushisa ngokulinganayo.
3. I-distillation noma i-fractionation kufanele isetshenziswe nge-plug yerabha, i-catheter, i-condenser, njll.
U-Huida uneminyaka eminingi enolwazi ekukhiqizeni nasekucubunguleni ingilazi yegabha kanye nezindinganiso eziphakeme zemboni. Ulayini womkhiqizo ucebile futhi ungahlangabezana neningi lezinhlelo zokusebenza zokuhlola ingilazi. Woza ukhethe imikhiqizo efanele yezinhlelo zakho zokusebenza zokuhlola.